हाडनाता प्रेमको परिणाम स् एकै साथ देहत्याग र अन्त्येष्टि, प्रहरी पनि विवादमा तानियो १ रातोपाटीबाट साभार - Jerung Films
हाडनाता प्रेमको परिणाम स् एकै साथ देहत्याग र अन्त्येष्टि, प्रहरी पनि विवादमा तानियो १ रातोपाटीबाट साभार
जेरुङ फिल्मस् ,४,असार । गुल्मीको छिमेकी जिल्ला प्युठानमा दाजु बहिनीबीच प्रेम सम्बन्धलाई स्थानीयले असफल पार्न खोजेपछि दुवैजनाले एकैसाथ विष सेवन गरेर आत्महत्या गरेका छन्् ।
झिम्रुक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ नेपाने निवासी २३ वर्षे एक युवक र १७ वर्षीया युवतीले विषसेवन गरेका हुन् ।
विष सेवनबाट शनिबार उनीहरूले देह त्याग गरेपछि आइतबार परिवारले सहमति गरेपछि घटना बाहिर आएको हो ।
सहमति पश्चात परिवारले सोमबार बिहान शव बुझेर एकै साथ झिम्रुक घाटमा अन्त्यष्टि गरेका छन् ।
प्रेमी बनेका दाजुको शव र प्रेमिका बनेकी बहिनीको शवमा दुवैका परिवारजनले दागबत्ती दिइरहँदा कोलाहाल मच्चिएको छ ।
उनीहरू करिब सय मिटर टाढा घरधुरी र १३ दिने दाजुभाइका छोराछोरी रहेका थिए ।
उनीहरू जेठको अन्तिम सातातिर भागी विवाह गरी भारततिर हिँडेका थिए ।
त्यस क्रममा उनीहरूलाई कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा पुग्दा माइती नेपाल भन्ने संस्थाले रोक्यो ।
त्यसपछि ती युवाको घरमा सो संस्थाले फोन ग¥यो । उनकी आमाले उनीहरू दाजुबहिनी हुन उपचार गर्न हिँडेकाले छाडिदिन अनुरोध भएपछि संस्थाले छाडिदियो ।
त्यसपछि उनीहरू दुवै जना भारतको दिल्ली पुगे ।
त्यसको केही दिनपछि फेरि युवतीकी आमाले माइती नेपाल पुगेर मेरो सहमतिविना किन छाडियो भनेर आक्रोश पोखिन् ।
त्यसपछि फर्केर उनले झिम्रुक–५ मा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मच्छीमा गएर हाडनाता करर्णीविरुद्धको उजुरी दिइन् ।
प्रहरीले दुवै पक्षका अभिभावकलाई झिकायो ।
युवतीकी आमाको माग बमोजिम प्रहरीले युवकको परिवारलाई एक हप्ताभित्र उनीहरूलाई भारतबाट झिकाए ।
जेल हाल्नेसम्मको धम्की दिए ।
अन्ततः दुवै जना त्यहाँबाट हिँडे ।
युवाका भाइ कृष्णनगरसम्म लिन गएका थिए । उनले दुवै जनालाई मच्छी इलाका प्रहरी कार्यालयमा जेठ–३० गते साँझ बुझाए ।
अर्को दिन युवतीले म भारतमा बस्ने भएकाले १३ दिने दाजुभाइ भएको आफूलाई थाहा नभएर माया प्रेम बस्न गएको बताइन् ।
युवाले त्यस गाउँका कतिपय घटनाको उदाहरण दिँदै भने– ‘अरूले भाउजु र आमा पर्नेसम्मलाई लगेका छन् भने हामीलाई किन रोक्नु हुन्छ रु हामी एकअर्काबिना बाँच्नै नसक्ने भएका छौं ।’
उनको यस्तो भनाइले गाउँले थप आक्रोशित भएर उनीहरूलाई कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय विजुवार लैजान माग राखे ।
त्यहाँबाट शिभिल पोसाकमा एकजना प्रहरी जवानको साथ लगाएर उनीहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा राखेर लगियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्युठानका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र पोखरेलसँग सम्पर्क राख्दा उनले ती दुवैलाई हिरासतमा नलिई सामन्य निगरानीमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याउन लागेको बेला दुखद् घटना घटेको बताए ।
उनले भने– ‘हिजो आइतबार एक खालको सहमति बनेर शव बुझेर लैजानु भएको छ, उहाँहरूले प्रहरीको कमजोरीमा दुवै जनाको ज्यान गएको भन्ने आरोप लगाउनुभएको छ । तर, उनीहरू हिरासतका पात्र थिएनन् ।’
सामन्य निगरानीमा राखेर मच्छी प्रहरी चौकीका जवानले जि।प्र।का। ल्याउँदै गर्दा उनीहरूले बाटोमा विष सेवन गरेर यस्तो दुखद् घटना भएको प्रहरीको भनाइ छ । तर दुवै अभिभावकका पक्षबाट स्थानीय समाजसेवी दानबहादुर जिसी मच्छी प्रहरी चौकीका जवानको चरम लापरवाही भएको आरोप लगाउँछन् । उनले भने– ‘प्रहरीको निगरानीमा भएका दुवै जनाले विष सेवन गर्दा के हेरेर बसे ? के यही हो सुरक्षा ?
उनी भन्छन्– ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर घिमिरेको रोहवरमा बसेको बैठकले गरेको कागजपत्रमा संस्थागत कमजोरी मात्रै स्वीकार गरियो । तर ती प्रहरी जवानको कमजोरी उल्लेख गरिएन । त्यसपछि अभिभावकहरूले उक्त कुरा उल्लेख नगरेसम्म सहमति नगर्ने अडान लिइयो । त्यसपछि निजलाई कारवाही गर्ने लिखित सहमति भएपछि मात्र शव उठाइको हो ।
उनका अनुसार बाटोमा जाँदै गरेको अवस्थामा उनीहरू मरनथाना भन्ने स्थानमा ओर्लिए । त्यसपछि बागदुला भन्ने स्थानमा फेरि ओर्लिए । त्यहाँ ओर्लेर उनीहरूले नास्ता खान्छौँ भने । केरा र पानी खाए । युवतीलाई रजस्वला भएको भन्दै शौचालयमा कपडा फेर्छु भनिन् र शौचालय पसिन् ।
युवती बाहिर निक्लेलगत्तै युवा पनि शौचालय पसेर बाहिरिएका थिए । त्यहाँबाट हिँडेका उनीहरूलाई कृषि विकास कार्यालय नजिक ओरालियो । त्यहाँ उनीहरू पानी पिउँदै एक आपसमा हाँस्दै जिस्किँदै थिए । त्यसपछि नजिकै रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मुद्दाफाँटमा ल्याइयो ।
सोधपुछ गर्दागर्दै युवतीले वान्ता गर्न थालिन् । उनलाई उनका प्रेमी र प्रहरीले समातेर बाहिर लगे, लगत्तै उनका प्रेमीले पनि वान्ता गर्न सुरु गरे ।त्यस क्रममा युवाले प्रहरीलाई आफूहरू दुवैले विष सेवन गरेको बताएको प्रहरीको भनाइ आए पनि प्रहरीबाहेक सुन्ने देख्ने सर्वसाधरण अरू छैनन् ।